ရာသီမလာခင် လူသတ်ချင် – Premenstrual Syndrome (PMS) – Tameelay
မြန်မာပြည်သိန်းတန်ကြောင့် ပွဲအပြီး မြန်မာအိုင်ဒေါ တာဝန်ရှိသူများကြား ဂယက်ရိုက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်
ရာသီမလာခင် လူသတ်ချင် – Premenstrual Syndrome (PMS)
* ရာသီမလာခင် လူသတ်ချင် – Premenstrual Syndrome (PMS) **
● ရင်သားတွေ နာကျင်ခြင်း
● အစားအစာတွေကို စားချင်တပ်မက်ခြင်း
● စိတ်ဖိစီးမှုဓာတ်ကို မခံစားနိုင်ခြင်း
● အိပ်ရ ခက်ခဲခြင်း
ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေဟာ ရာသီမလာခင် 1 ပတ်၊2ပတ်လောက်မှာ ဖြစ်တတ်ပြီး ရာသီလာတာနဲ့ ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။
>> ဘာလို့ ဒီလို PMS ဖြစ်ရတာလဲ?
ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ သေချာမသိရပေမယ့် ဆရာဝန်များကတော့ ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရာသီလာပြီးချိန်မှာ Estrogen နဲ့ progesterone ဟော်မုန်းတွေ မြင့်တက်လာပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် ရာသီပြန်မလာခင် 1 ပတ်ခန့်မှာ ဒီဟော်မုန်းဓာတ်တွေ ပြန်လျော့ကျသွားပါတယ်။ ဒီလိုဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တချို့မိန်းကလေးတွေမှာ PMS ဖြစ်တတ်ပေမယ့် တချို့မှာ မဖြစ်ရတာဟာလည်း ထူးဆန်းနေပါတယ်။ PMS ဝေဒနာခံစားရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကို ပိုပြီးခံစားရလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ကလည်း ရာသီမလာခင်ရက်တွေမှာ စားတဲ့ အစားအစာတွေပေါ်မှာလည်း မူတည်သေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကံကောင်းတာကတော့ ဒီလို PMS ဝေဒနာ မခံစားရလေအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာ အသီးအရွက်တွေ စားပေးတာ၊ အသင့်စား အစားအသောက်တွေ အကြော်တွေကို ရှောင်တာ၊ ဆားလျှော့စားတာနဲ့ ရေများများ သောက်တာတွေက PMS မဖြစ်ရလေအောင် ဟန့်တားပေးနိုင်မှာပါ။
ကဖိန်းဓာတ်က ရင်တုန်ပြီး စိတ်ပူပန်စေနိုင်တာကြောင့် မသောက်သင့်ပါဘူး။ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ။ ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ ဗီတာမင်အားဆေးတွေ သောက်ပေးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ စိတ်ငြိမ်စေတဲ့ တရားထိုင်ခြင်းလိုမျိုးတွေကို လုပ်သင့်ပါတယ်။
ခေါင်းကိုက်၊ ခါးကိုက်အတွက်တော့ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး အလွယ်တကူ ဝယ်သောက်နိုင်ပေမယ့် အရမ်းဆိုးတဲ့ PMS အတွက်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ တားဆေးဖြစ်စေ သောက်စေပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျနေတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိခိုက်စေလိုတာမျိုး ရှိရင်လည်း ဆရာဝန်နဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
* ရာသီမလာခငျ လူသတျခငျြ – Premenstrual Syndrome (PMS) **
လစဉျလတိုငျး ရာသီမလာခငျမှာ အမြိုးသမီးတှဟော စိတျရောကိုယျရော ပွောငျးလဲမှုတှကေို ခံစားရပါတယျ။
● အလှနျအမငျး ပငျပနျးနှမျးနယျခွငျး
● ရငျသားတှေ နာကငျြခွငျး
● အစားအစာတှကေို စားခငျြတပျမကျခွငျး
● စိတျဖိစီးမှုဓာတျကို မခံစားနိုငျခွငျး
● အိပျရ ခကျခဲခွငျး
ဒီလိုပွောငျးလဲမှုတှဟော ရာသီမလာခငျ 1 ပတျ၊2ပတျလောကျမှာ ဖွဈတတျပွီး ရာသီလာတာနဲ့ ပြောကျသှားတတျပါတယျ။
>> ဘာလို့ ဒီလို PMS ဖွဈရတာလဲ?
ဘာကွောငျ့ဖွဈရတယျဆိုတာ သခြောမသိရပမေယျ့ ဆရာဝနျမြားကတော့ ဟျောမုနျး အပွောငျးအလဲတှကွေောငျ့ ဖွဈနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ရာသီလာပွီးခြိနျမှာ Estrogen နဲ့ progesterone ဟျောမုနျးတှေ မွငျ့တကျလာပါတယျ။ နောကျတဈကွိမျ ရာသီပွနျမလာခငျ 1 ပတျခနျ့မှာ ဒီဟျောမုနျးဓာတျတှေ ပွနျလြော့ကသြှားပါတယျ။ ဒီလိုဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
တခြို့မိနျးကလေးတှမှော PMS ဖွဈတတျပမေယျ့ တခြို့မှာ မဖွဈရတာဟာလညျး ထူးဆနျးနပေါတယျ။ PMS ဝဒေနာခံစားရတဲ့ အမြိုးသမီးတှဟော ဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲကို ပိုပွီးခံစားရလို့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ တခြို့ကလညျး ရာသီမလာခငျရကျတှမှော စားတဲ့ အစားအစာတှပေျေါမှာလညျး မူတညျသေးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ကံကောငျးတာကတော့ ဒီလို PMS ဝဒေနာ မခံစားရလအေောငျ ကွိုတငျကာကှယျလို့ ရနိုငျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျစှာ အသီးအရှကျတှေ စားပေးတာ၊ အသငျ့စား အစားအသောကျတှေ အကွျောတှကေို ရှောငျတာ၊ ဆားလြှော့စားတာနဲ့ ရမြေားမြား သောကျတာတှကေ PMS မဖွဈရလအေောငျ ဟနျ့တားပေးနိုငျမှာပါ။
ကဖိနျးဓာတျက ရငျတုနျပွီး စိတျပူပနျစနေိုငျတာကွောငျ့ မသောကျသငျ့ပါဘူး။ အိပျရေးဝဝအိပျပါ။ ကယျလျဆီယမျနဲ့ ဗီတာမငျအားဆေးတှေ သောကျပေးပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျး မှနျမှနျပွုလုပျခွငျးနဲ့ စိတျငွိမျစတေဲ့ တရားထိုငျခွငျးလိုမြိုးတှကေို လုပျသငျ့ပါတယျ။
ခေါငျးကိုကျ၊ ခါးကိုကျအတှကျတော့ ဆေးဆိုငျတှမှော အကိုကျအခဲပြောကျဆေး အလှယျတကူ ဝယျသောကျနိုငျပမေယျ့ အရမျးဆိုးတဲ့ PMS အတှကျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသသငျ့ပါတယျ။ ဆရာဝနျက ဆေးတဈမြိုးမြိုးဖွဈစေ၊ တားဆေးဖွဈစေ သောကျစပေါလိမျ့မယျ။
စိတျဓာတျကနြတော၊ ကိုယျ့ကိုယျကို ထိခိုကျစလေိုတာမြိုး ရှိရငျလညျး ဆရာဝနျနဲ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး တိုငျပငျသငျ့ပါတယျ။
လေဖြတ် ဝေဒနာသည် အတွက် ပထမ ၃နာရီ အရေးကြီး လေဖြတ်ခြင်း(Stroke) ကို ကုသရာမှာ အကြီးမားဆုံး အတား အဆီးကတော့ ကုသဖို အတွက် အချိန် တိုတောင်းခြင်း (A BriefWindow Period for Treatment) ပဲ ဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။ ဒီအချိန်လေးက …
“အိမ်ထောင်ဖက်” လိုတာလား? အိမ်ထောင်ဖက်အမည်ခံ “အိမ်ဖော်” ကိုလိုတာလား…